Amathiphu ama-4 Wokwenza Isu Lempumelelo Lokumaketha Ividiyo Kwebhizinisi Lakho | Martech Zone
Akuyona imfihlo ukuthi ukusetshenziswa kwevidiyo ekukhangiseni okuqukethwe kuyanda. Eminyakeni embalwa edlule, ividiyo eku-inthanethi ikhombise ukuthi iyindlela yokuqukethwe ebandakanya kakhulu futhi ephoqelela abasebenzisi. Imithombo yezokuxhumana isingezinye zezinkundla ezisebenza kahle kakhulu zokumakethwa kwamavidiyo, futhi lelo yiqiniso okungafanele lithathwe kalula. Sinezeluleko ezibalulekile ongazenza zokukhiqiza amavidiyo asebenzayo adonsa ukunaka kwezithameli zakho ukuze ekugcineni athathe isinyathelo.
1. Dala amavidiyo ukuze ukhiqize ukuhola
Ngokungafani nawe, abathengi bakho abangacabangi ngemikhiqizo noma ngezinsizakalo usuku lonke njengawe. Esikhundleni salokho, banezintshisekelo zabo nezinhloso zabo. Ukuze wenze abathengi abangaba khona bame futhi banake, uzodinga ukwenza okuqukethwe kwakho kuphindeke kubo.
Abantu bayazithanda futhi bayazikhumbula izindaba. Indaba emnandi inengxabano ecacile kanye nesisombululo esanelisayo. Uma ukwazi ukubiyela ibhizinisi lakho usebenzisa indaba enenkinga esemthethweni nesixazululo esisebenzayo, abantu maningi amathuba okuthi balalele umlayezo wakho ngokuphelele futhi bakhumbule lokho okufanele unikeze ngakho.
2. Thola amavidiyo akho atholakale futhi abe sezingeni elingcono ku-Youtube
Ukulayisha ividiyo akwanele. Ukuze uthole ukubukwa okuningi futhi wenze imiphumela, udinga ukutshela i-Youtube ukuthi ividiyo yakho imayelana nani nokuthi iziphi izithameli eziqondiwe ezizoyithanda. Ukulungiswa kwevidiyo kukunikeza ithuba lokuthi amavidiyo akho akalwe futhi okuqukethwe kwakho kutholakale kubantu abafanele. Ngakho-ke uma ufuna ukuthola ukubukwa okuningi, ababhalisile kanye nethrafikhi evela ku-Youtube, landela lezi zeluleko ezilula:
Khomba amagama akho angukhiye bese uqinisekisa ukuthi ulungiselela okuqukethwe kwakho kwe-Youtube.
Bhala isihloko esifushane, esivusa amadlingozi, nesiphoqayo esichaza kafushane ukuthi ividiyo yakho imayelana nani. Isihloko kufanele sifake amagama akho angukhiye aqondisiwe.
Bhala incazelo eningiliziwe etshela ababukeli bakho ukuthi kungani ividiyo yakho ibalulekile ukuyibuka futhi uqiniseke ukuthi ifaka amagama akho angukhiye. Qaphela ukuthi kuphela imigqa emi-3 yokuqala ebonakalayo ku-Youtube ngaphandle kokuchofoza ifayela le- BONISA OKWENGEZIWE link, ngakho-ke noma yiziphi izixhumanisi nokubizelwa ezenzweni kufanele kubekwe phezulu.
Faka amathegi afanele nokuhlukaniswa ngezigaba. Lokhu kusiza i-Youtube ibonise ividiyo yakho njengevidiyo ephakanyisiwe lapho abasebenzisi babuka amavidiyo afanayo.
Faka isithonjana sangokwezifiso sevidiyo esihambisana nomkhiqizo wakho ukuze izithameli zakho ezihlosiwe zikwazi ukukhomba amavidiyo akho kalula.
Faka imibhalo engezansi namagama-ncazo. Lokhu kuzothuthukisa i-Youtube SEO yakho futhi kuzoba lula kubabukeli ukuyibuka endaweni enomsindo noma ngaphandle komsindo.
Khuthaza impendulo, imibono, nemibuzo. Lokhu kuzonikeza igunya lesiteshi sakho futhi kukusize wakhe umphakathi.
Faka izikrini zomdabu ze-Youtube ekugcineni kwevidiyo. Lokhu kuzokusiza ukuthi uphakamise okuqukethwe kwakho, isiteshi sakho, futhi uhambise ithrafikhi kuwebhusayithi yakho.
3. Khiqiza ukuqwashisa nokushayela ithrafikhi
Ama-Video Teasers aklanyelwe ukubamba ukunaka kwababukeli futhi kukhuthaze ilukuluku. Abaphumelelayo banikeza nje ukunambitha kokuzayo ukuze abantu balangazelele ukuthola eminye imininingwane. Kulezi zinsuku, iSocial Media inikeza indlela esheshayo nelula yokuthola ulwazi oluningi laphaya ngemikhiqizo noma ngezinsizakalo zakho ngesikhathi esifushane. Ukwabelana ngama-teasers evidiyo kuyindlela ephumelelayo yokubamba ukunaka kwezilaleli zakho bese ubamema ukuthi bavakashele iwebhusayithi yakho ukuthola amavidiyo ajulile kanye nolwazi. Lokhu kuzokusiza ufundise amathemba akho, ukhiqize imikhondo efanelekile futhi wandise isilinganiso sakho sokuvala.
4. Kala Nokulawula
Manje njengoba usethule ividiyo yakho, udinga ukukala ngokufanele nangokunembile ukusebenza kokuqukethwe kwevidiyo yakho. Futhi ngenkathi ukubukwa kwamavidiyo kuyilokho abathengisi abaningi abangakubheka ekuqaleni, akuyona njalo indlela engcono yokulinganisa ukuthi ividiyo yakho isebenza kahle kangakanani.
Konke kumayelana nomgomo wakho!
Ukusetha imigomo yevidiyo kufanele kube isinyathelo sakho sokuqala. Lokhu kuzokunikeza ukuholwa okudingekayo ukuze ugxile kuphela kudatha oyidingayo futhi ugweme ukuchitha isikhathi kulwazi olungabalulekile. Yini onethemba lokuyizuza? Uyini umgomo wakho oyinhloko wokukhangisa walo mkhankaso? Ngabe ufuna ukukhiqiza ukuqwashisa, ukusiza ukwenza isinqumo, noma ukugqugquzela isenzo?
Ngokuya ngalokho, ungabona ukuthi yimaphi amamethrikhi azosebenza kunhloso ngayinye.
Manje, ake sibone ukuthi imaphi amamethrikhi ongawasebenzisela izinhloso zakho:
Ingqikithi Yokudlala - Le yimethrikhi elula kunazo zonke kodwa ekhohlisa kunazo zonke. Imidlalo ephelele ikukhombisa inani labantu abangaqofanga inkinobho yokudlala kuvidiyo yakho kungakhathalekile ukuthi bayibuke isikhathi esingakanani le vidiyo. Yize le metric ilungele ukukalwa kokufinyelelwa, awukwazi ukunquma ukuthi isebenza kanjani futhi iheha ividiyo yakho.
Isilinganiso sokudlala - I-Play Rate iphesenti lezivakashi zekhasi ezichofoze inkinobho yokudlala futhi zaqala ukubuka ividiyo yakho. Izinga lokudlala libalwa ngokuthatha inani eliphelele lemidlalo futhi lihlukaniswe ngenombolo yemithwalo yevidiyo. Lokhu kuzokusiza ukuthi unqume ukuthi ividiyo ishumekwe endaweni efanele nokuthi sikhanga kangakanani isithonjana sevidiyo yakho. Uma uthola amanani wokudlala aphansi, ungahle uthande ukucabangela ukubeka ividiyo yakho endaweni evelele kakhulu, wenze ividiyo eshumekiwe ibe nkulu, nokuba nesithonjana esiheha kakhudlwana.
Isilinganiso sokuzibandakanya - Ukuzibandakanya kukukhombisa ukuthi ababukeli bevidiyo yakho babuke kangakanani, futhi kuvezwa njengephesenti. Lesi yisibonakaliso esikhulu esikutshela ukuthi ividiyo yakho ibaluleke kangakanani futhi iyathandeka kubabukeli bakho futhi ingakusiza ukuthi ubone ukuthi ababukeli bakho baqala nini ukulahlekelwa intshisekelo nokuthi iziphi izingxenye ezeqiwe. Lokhu kuzokusiza futhi ukubeka izinkinobho zokubizela esenzweni nezinye izinto ezisebenzisanayo ngokwamasu ngesikhathi sevidiyo.
Ukukwabelana Komphakathi - Ukwabelana Komphakathi kukhombisa ukuthi okuqukethwe kwakho kwevidiyo kwabiwa kanjani kuziteshi zokuxhumana. Ukwabelana ngokuqukethwe kuholela ekubukeni okuningi kwevidiyo, ukufinyelela izethameli ezintsha, futhi kungakusiza ukuthi ubone ukuthi izithameli zakho zijabule kangakanani ngokuqukethwe nomkhiqizo wakho.
Isilinganiso sokuguqulwa - Ukuguqulwa yinombolo yezenzo ezithathiwe ngesikhathi noma ngemuva kokubukwa kwevidiyo. Lokhu kungaba ama-CTA nezichasiselo zichofoziwe, imikhondo ikhiqiziwe, nokuningi. Le metric kuyinto ethe xaxa ukulandela umkhondo, futhi uzodinga isidlali sevidiyo esizinikele esifana neWistia, iVidyard noma iSprout Video ukuze kwehliswe imicimbi ngemininingwane eminingi. Isilinganiso sokuguqulwa yimethrikhi ebalulekile esetshenziselwa ukusiza ukukala i-ROI eyenziwe ngamavidiyo akho.
Ufuna ukufunda kabanzi ngokuthi ividiyo ingasiza kanjani ukuqala imizamo yakho yokumaketha?
Xhumana nathi manje ngokubonisana kwamahhala kokumakethwa kwevidiyo.
Sicela uvakashele Isiteshi sethu se-Youtube ukuthola amanye Amathiphu Wevidiyo aqinisekile ukukhulisa imikhankaso yakho yokumaketha.
Tags: Igumbi4 mediaumabhebhanaukuqwashisa ngevidiyoukuguqulwa kwevidiyoukuzibandakanya kwevidiyoamagama angukhiye wevidiyoukukhangisa kwevidiyoisu lokukhangisa ngevidiyoamamethrikhi evidiyonokwenza kahle kwevidiyoisilinganiso sokudlala ividiyokudlala ividiyoukwabelana ngamavidiyoisu le-youtube
Nov 3, 2020 ngo-3: 34 AM
May 14, 2021 ku-7: 24 AM
Siyabonga ngokwabelana ngamathiphu. Ngisebenzisa lokhu ukwenza abanye baqonde.